ONN: Dhaamsa Abbaacabsaa warra TV ONNiif! – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosONN: Dhaamsa Abbaacabsaa warra TV ONNiif!
ONN: Dhaamsa Abbaacabsaa warra TV ONNiif
ONN sababa kamiinuu haa ta’uutii satellite 🛰 irraa bu’uus, hojii maaf dhaabdan? Zamana kana galanni qalata teknooloojiitiif haa ta’uutii hambaa (platform) adda addaatu jiru yaada keenya ummata biraan gahuuf– televiziyoonni 📺 isa tokko malee isa qofaatii mitii; tana quba qabaadhaa. Hambaaleen hawaasummaa (social media platforms) kanneen akka YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, WordPress fii, …kkf irratti hojjachuudhaan dhaamsa qabnu sabaaf dabarsuun ni danda’ama — hedduu salphaadhas.
Fakkeenyaaf miidiyaaleen habesha waca qofa uumuudhaan hanga tokkos ta’u hawaas-siyaasa (socio-political) biyyattii kanaa kan amma jirurratti dhiibbaa uumaa jiran kanneen akka #AbayMedia, #Ethio360, #Andafta, #WazemaRadio, #ReyotRadio, #Ethiotube, #Ethiomedia fii kkf satellite 🛰 irra hin jirani — takkaa satellite irra jiraatanitis hin beekan.
Warri ONN satellite irraa bu’uu (sababa kamiinuu haa ta’uutii) sababeeffattanii hojii dhaabuun keessan sirrii natti hin fakkaatu. Hanga tamsaasa satellite TV deebifattanitti calliftanii ciisuurra hambaalee (platforms) hafan hedduu kanniinin irratti itti fufuu maaf dadhabdan laata?
We need more and more of pan-Oromo voices who speak for the plight of our people in Oromia/Ethiopia.
#Oromo #Oromia #MediaOutReach
TVOMT/ONN:Qophii Dooyaa Marii,Mootummaan Bilxiginaa Sabboontoota Koroonaan fixuuf mana hidhatti guuraa jirtti
የሰይፈ ነበልባል ራዲዮ በወቅታዊ እና በሃገራዊ ጉዳይ ላይ አጭር ውይይት ሚያዚያ 20/2020
Seife Nebelbal Radio interviw on April 20, 2020